musha Europe Martin Garrix Utano Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Martin Garrix Biography inoratidza Chokwadi pamusoro pehucheche Nyaya Yake, Hupenyu hwepakutanga, Mhuri, Vabereki, Mararamiro, Vasikana / Mukadzi kuti ave, Hupenyu hweMunhu uye Net Kukosha.
Zvichitaurwa zviri nyore, tinokupa iwe nerwendo rwehupenyu hwaDJ, kubva pamazuva ake ekutanga kusvika paakave mukurumbira.
Kunatsiridza chishuwo chako chehupenyu hwehupenyu, heino hudiki hwake kune vanhu vakuru gallery - pfupiso yakakwana yeMartin Garrix Bio.
Iyo biography yaMartin Garrix - Kubva paUdiki hwake Makore kusvika panguva yemukurumbira.
Hongu, munhu wese anoziva kuti ndiye mudiki pane munhu kurova iyo nhamba yekutanga nzvimbo paBeatport 100 chati. Nekudaro, vashoma chete vateveri vakaverenga pfupi memoir nezvake.
Nekudaro, isu takagadzirira inosanganisirwa Biography yaMartin Garrix, yaungawane inonakidza. Pasina ado yakawanda, ngatitangei.
Martin Garrix Yehucheche Nhau:
Tisati tapinda muhupenyu hwake mune zvakadzama, ane zita remadunhurirwa rekuti "Ytram uye GRX". Zvisinei, zita rake rekuzvarwa ndi Martijn Gerard Garritsen.
Ytram akaberekwa musi we 14th waMay 1996 kuna baba vake, Gerard Garritsen, uye amai, Karin Garritsen, muAmstelveen, Netherlands.
Martin Garrix ndiye mwana wekutanga wevana vaviri vakazvarwa mumubatanidzwa pakati pevabereki vake, akafananidzirwa naye pazasi.
Pasina mubvunzo, anofarira kushandisa imwe nguva yakanaka naamai vake nababa.
Panzvimbo pekushanyira mamiziyamu evana nemapaki ekuvaraidza, Garrix wechidiki aifarira kugara kumba achiteerera mimhanzi.
Chokwadi, vabereki vake vaisagona kufuratira kuda kwake nziyo dzakanaka.
Saka, vakawana Garrix, mudzidzisi akamudzidzisa kuridza gitare. Paakazopedza 8, akanga ava kunyatsogona kushandisa chiridzwa chacho.
Martin Garrix Hudiki - Kukura Mazuva:
Kunze kwekuda kwake mimhanzi, GRX inonakidzwa nekuona zviitiko zvemitambo paTV. Zvakangoitikawo, akaona mashandiro aDi Tiesto mu2004 Yemitambo yeOlimpiki Yezhizha.
Kurohwa kwaDJ kwaive kwepfungwa-kuridza zvekuti kwakakanda Garrix mune imwe nguva yekufara. Panguva iyoyo yekunakidzwa, mukomana mudiki akataura kufarira kwake kuti ave DJ saTiesto.
Pasina kutambisa nguva, Garrix akatanga kushanda achigadzirisa kurota kwake. Akakopa dhijitari odhiyo yekushandira (FL Studio) uye akamisa imba yake yebasa kuti agadzire mabheti ake.
Pazera diki kudaro, wechidiki Garrix akatanga kugadzirira ramangwana riri nani. Ehezve, akapedzisira azadzisa zviroto zvake.
Martin Garrix Mhuri Kubva:
Mumakore mashoma apfuura, vateveri vakazvipira vakatendeudzira kwavo kudzidza zvakawanda nezvekwakabva. Zvese izvo zviripo kumadzitateguru ake ndeyekuti iye chiDutch.
Chii chimwe?… Garrix anobva kudhorobha rine zvivakwa zvinokatyamadza uye mamiziyamu akanaka.
Kwaakaberekerwa (Amstelveen) kunogara vanhu vazhinji vanoshanda paAmsterdam Schiphol Airport. Ndosaka ichinzi the 'taundi revatyairi'.
Ehe, anouya achibva kuguta (Amstelveen) iyo yakaunza vazhinji vatyairi.
Martin Garrix Mhemberero Yemhuri:
Kubva pamazuva ake ehudiki, mugadziri menage aigara achizvidzivirira semhuri yepakati-mhuri. Sezvinotarisirwa, vabereki vaGarrix vakashanda nesimba kuti vaone kuti iye nehanzvadzi yake (Laura) vane dzidzo yemhando yepamusoro.
Nekutenda, baba vake naamai vaive vakadzidza zvemari. Nekudaro, ivo vaikwanisa kuronga mashandisiro emashandisirwo emari dzavanowana.
Mushure mekubudirira kwake muindasitiri yevaraidzo, Garrix akasimudzira mhuri yake kubva pakati-kirasi kuenda kuimba yakapfuma.
Martin Garrix Dzidzo - Kutora Njodzi Yakakura Kwazvo:
Kukura muAmstelveen, vabereki veGRX vakamunyoresa pachikoro chenguva dzose sevamwe vana vese. Nekudaro, pfungwa dzake dzaisagutsikana nekungotarisa kune vadzidzi.
Zvinosekesa zvakakwana, Garrix aigara achitora imba yeshamwari yake panguva yake yekuzorora kweawa-yega kuti aburitse mabheti mu studio yake. Akashingairira kucherechedza chiitiko ichi chero bedzi paakadzidza pachikoro ichi.
Zororo rega rega rechikoro rakanyora mukana wekuti afambise hunyanzvi hwake muhunyanzvi hwehope dzake.
Achinzwa kusagutsikana, mudiki wechiDutch akatsvaga chikoro chemimhanzi pasina ruzivo rwevabereki vake.
Kare ikako, aifanirwa kutangazve pachikoro chake chitsva mazuva matatu mushure mekunge aonana navo.
Nekudaro, Garrix aifanira kunyengerera baba naamai vake kuti vamubvumire kuchinja zvikoro mukati menguva.
Martin Garrix Ekutanga Basa Roupenyu:
Nehushingi hwakawanda, GRX yakaita hurukuro pfupi nevabereki vake nezvechisarudzo chake chekuchinja chikoro. Vakakatyamadzwa nechinangwa chemwanakomana wavo chekusiya vadzidzi vake kuti vaite basa muvaraidzo.
Nekudaro, Garrix haana spam mazwi akawandisa asati apedzisira awana mvumo yavo. Nekudaro, akanyoresa kuHerman Brood Academy, kwaakapedza kudzidza mu2013.
Asati apedza kudzidza, akaunzwa kumukurumbira wepasi rose remumhanzi nemunhu chaiye akamukurudzira kuti ave DJ - Tiesto.
Sangana naye wekutanga chipangamazano uye kufemerwa, Tiesto.
Izvo zvakatanga sekushuvira munguva pfupi zvakazove chokwadi sezvo Garrix akatanga kuburitsa nziyo dzinonakidza uye kurova. Basa rake rekutanga, 'BFAM', yaive yekubatana pamwe needu DJ DJian Jordan.
Martin Garrix Biography - Rwendo rweMukurumbira:
Nekuda kwehunyanzvi hwekugadzirwa kwake kwakatevera, GRX yakahwina kutendwa kwemazhinji marekodhi. Mu2012, akatora nhanho kumberi mune rake basa sezvaakasaina naSpinnin 'Records.
Kunze kwegore mushure mekondirakiti yake yekutanga, Garrix akaita solo yakaburitswa yakanzi 'Mhuka'. Sezvineiwo, chiridzwa chake chitsva chakave chakakurumbira munyika zhinji muEurope.
Sekuda kwaDestiny, kurova kwakapinza mukomana wedu pakuva munhu mudiki kukwira nhamba yekutanga paBeatport.
Pazasi pane iyo official instrumental vhidhiyo iyo yakamuwanira yake yekutanga basa kubudirira.
Martin Garrix Biography - Iyo Yakabudirira Nyaya:
Makore akatevera ehupenyu hwake akanyora nhamba yakanaka yezvaakaitwa.
Moreso, zvaakaita zvakavimbisa vabereki vake kuti danho ravo rekumutendera kuti apinde mumhanzi ndicho chinhu chakanakisa chavaitira Garrix.
Sezvineiwo, akabudirira kushandira pamwe nevaimbi vane mukurumbira vakaita Ed Sheeran uye Usher kugadzira mimhanzi inonakidza.
Zvisinei, chikamu chinotevera chehupenyu hwake chakanyora matambudziko akatevedzana neSpinnin 'Rekodi, izvo zvakaita kuti abude kubva pazita racho.
Kubatana kwake naUsher kwakatsanangurwa sechiitiko chinoshamisa.
Unoziva here?… Garrix anga aine makore makumi maviri paakatanga rekodhi yake inonzi STMPD RCRDS. Akaendawo rwendo rwemimhanzi nemuimbi weCanada; Justin bieber muna 2017.
Nguva imwe neimwe Garrix paanoenda kunoratidzwa, anova nechokwadi chekuti anoita kuti vateereri vake vafarire. Iwe unoona here kuti vateveri vake vibe sei kune avo vanorova mumufananidzo pazasi?
Mutambi wedu ane tarenda anoratidza kugona kwake kuzere mushoo.
Pandinonyora iyi Bio, muenzi wechiDutch akashanda nesimba kuti abudise rwiyo rwepamutemo rweUFA EURO 2020. Akaratidza Bono uye The Edge mumumhanzi waakatumidza 'Tisu Vanhu'.
Sezvineiwo, akaburitsa njanji mwedzi mumwe chete makwikwi asati atanga pazuva regumi nerimwe raJune 11. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Lynn Spoor ndiani? Martin Garrix Musikana:
Nguva pfupi mukomana wedu asati avhara makumi maviri, anga abatanidzwa muhukama huviri hwatinoziva. Kutanga, Garrix akatanga kufambidzana neDutch illustrator Lynn Spoor kumashure muna 20.
Nekudaro, hupenyu hwake hwerudo nemusikana wake wekutanga havana kumbobvira vatambira kutarisisa kubva kuvateveri vake vakazvipira. Chaizvoizvo, hukama hwake naLynn Spoor hauna kugara kwenguva refu.
Garrix anowanzoisa kuseka kwakanaka pamwe chete nemusikana wake wekutanga. Haana kuziva kuti hukama hwavo hwaisazogara kwenguva refu.
Martin Garrix naBebe Rexha:
Muna 2016, runyerekupe rune kuti Garrix anga achidanana nemuimbi weAmerica Bebe Rexha. Izvo zvese zvakaitika apo vanofungidzirwa kuti vaviri vacho vaishanda pane yavo nyowani nyowani - 'MuZita Rorudo'.
Kusvika parizvino, Childhoodbiography ichiri kushamisika kuti chii chingave chakonzera kufungidzira kwakadaro pakati pevateveri.
Zvichida, vhidhiyo yavo yekubatana pazasi inobata chokwadi chakavanzika nezvehukama hwavo? Tarisa uye uzvitonge iwe pachako.
Martin Garrix Ukama NaCharelle Schriek:
Sezvineiwo, mudiki mugadziri akashinga akaenda kune yake Instagram peji kuti agovane akawanda mafirimu mafoto ake iye nemusikana wake mutsva. Hongu, achiri zvakare kudanana nemusikana akanaka wechiDutch.
Anonzi Charelle Schriek, uye iye inyanzvi modhi akapedza kudzidza kuHogeschool van Amsterdam. Unoziva here?… Musikana waMartin Garrix (Charelle) ane makore mashanu kumudarika.
Anonzwa kufara zvakanyanya pese paanobata maoko nemusikana wake akanaka pavanenge vachifamba munzira.
Kuunza hupenyu hwehukama hwake kusvika padyo, Garrix akave zvakare akabatanidzwa kune Dua Lipa. Nekudaro, kwave pasina humbowo hunonongedza chero hukama hwekudanana pakati pevakakurumbira vaviri.
Martin Garrix Hupenyu hweMunhu kure naDJ Works:
Chii chinoita kuti vechidiki vechiDutch vakobvu?… Zvinokufadza kuziva kuti haasi munhu anozvizivisa.
Hongu, kunyange amai vake nababa vakapupura kuti hapana nguva yakaoma nemwanakomana wavo mumwe chete pamba.
Hazvishamisi kuti Garrix akachengetedza tempo yakakwirira pane imwe neimwe yezviratidzwa zvake. Pese paanenge asiri kugadzira mimhanzi, neimwe nzira anozvichengeta kubva pakufinhwa.
Ndichiri kuisa biography yake, takaona kuti muvaraidzi anofarira kudhivha mudenga.
Kunyangwe asiri iye skydiver yehunyanzvi, anga achishanda nesimba kuti asvike padanho rekukwana, sezvatinoona muvhidhiyo pazasi.
Chimwe chinhu chinonakidza pamusoro peBio yake ndechokuti anofarira kushambira.
Pane dzimwe nguva apo Garrix akavhundutsa munhu wose nematarenda ake ekushambira. Akatoita kuti vateveri vake vayemurwe nekuramba kwake kutonhora kusingadaviriki paakasvetukira murwizi munharaunda yakaoma nechando.
Martin Garrix Mararamiro echokwadi:
Sezviri pachena, mukomana wedu ane zvikonzero zvese zvekunakidzwa nehupenyu hwepamusoro. Akaunganidza mari yakawanda kusvika pakuti FORBES Akamusanganisira iye mugore ra2007 re 'World's Highest-Paid DJs.
Pandinonyora iyi biography, Martin Garrix akaunganidza anofungidzirwa Net Kukosha kwe $ 22 Million. Kunyangwe kuve akapfuma se Max Verstappen, muvaraidzi haasati awana rezinesi rake rekutyaira (kubva muna Kukadzi 2021).
Zvinosekesa zvakakwana, haana kutenga imba yake, kana kuzvitengera zvakawanda zvekukwira. Nekudaro, Garrix anoda kuroja mota dzinodhura uye furati.
Hupenyu hwake hwoumbozha hwakamukurudzira kuti agare achihaya ndege yega. Sezvineiwo, mapatya-injini Cessna CJ3 yakavanzika jet inowanzo kumubhadharira £ 15k pakufamba.
Martin Garrix Hupenyu Hwemhuri:
Mugadziri wechidiki weDutch ane mari akazvimiririra haambofi akakanganwa nezve menage yake yese.
Hongu, kuongorora kwavo kuita kwake kwasvika kure mukumubatsira kubudirira kupfuura fungidziro yemunhu wese.
Nekudaro, isu tinokuudza iwe zvinonakidza zvimwe pamusoro paamai vake, baba uye hanzvadzi mune chino chikamu.
Nezve Baba vaMartin Garrix:
Sezviri pachena, murume wake akwegura akaita basa rakakosha mukuita kwake kusvika parizvino. Kunyangwe Mr Gerard Garritsen asiri muimbi ane hunyanzvi, akaratidzira kuda kukuru kwemimhanzi.
Sangana nababa vake, Gerard Garritsen. Chokwadi, iwo ma duos anogara achienderana pavanonyemwerera.
Zvechokwadi, Gerard akaita chimwe chezvisarudzo zvakaoma zvikuru chero baba vaizotora pavakabvumira Garrix kusiya zvidzidzo zvevaraidzo.
Sezvineiwo, akapedzisira asingadembi mutongo wake wekupedzisira maererano nebasa remwanakomana wake.
Nezve Amai vaMartin Garrix:
Sezvineiwo, muimbi anogovera chisungo chisinga tsanangurike naKarin Garritsen (amai vake). Tichitarisa nenyaya yekuti ari mumakore ake makumi mashanu, zviri pachena kuti amai vaGarrix vakamugamuchira munyika ino mumakore ake makumi matatu.
Pane kubatana kusinganzwisisike kuripo pakati paGarrix naamai vake. Iwe unogona kugara uchivaona vachigovana vibes pavanopemberera.
Chaizvoizvo haasi muimbi ane hunyanzvi. Zvisinei, Karin anoziva kuridza piyano.
Vabereki vaGarrix vanopota vachimuperekedza pane dzimwe nzendo dzake dzevaraidzo. Ona kuti amai vake vanotamba sei kune kurohwa kwake muvhidhiyo iri pasi apa.
Nezve hama dzaMartin Garrix:
Munhu asingatenderi celeb wedu kunyura mukusurukirwa ndiye munin'ina wake.
Zita rake ndiLaura Garritsen, uye anga akanamatira zvakanyanya kumunun'una wake kubva paudiki hwavo. Sezviri pachena, vanun'una vanonakidzwa nekudhonza marudzi akasiyana emapranks kune mumwe nemumwe.
Iyo nguva inosetsa paanofunga kupuruzira hanzvadzi yake yemwana panguva yekudya kwemanheru.
Iko hakuna kuve neruzivo rwechokwadi pamusoro pasekuru nasekuru vake nasekuru. Saizvozvowo, pakange pasina zvinyorwa pamusoro paambuya nasekuru vake pamwe nedzimwe nhengo dzemhuri yake yakakura.
Martin Garrix Untold Chokwadi:
Kutenderedza iyo dutch superstar's biography, heano mashoma echokwadi ayo angakubatsire iwe kuwana izere chirevo cheHupenyu Hwake Nyaya.
Chokwadi #1: Kudya Kwaunofarira:
Garrix ari pakati pevashoma celebs vane rudo rwakadzama rwe pizza. Moreso, anoona chikafu ichi chisingadzivisike pese panenge chakaswaswa nema truffles, chizi uye howa. Mufananidzo uri pazasi unoratidza zvakajeka kutaura kwake kwekunakidzwa pese paanodya pizza.
Kutaura kwake kwega kunotaurira yakawanda nyaya nezve rudo rwake rwakadzama rwe pizza.
Chokwadi # 2: Martin Garrix Tattoos:
Ehezve, iye atove nyanzvi yemhando yepamusoro. Nekudaro, haana kuratidza kufarira inking chero mhando yematatoo pamuviri wake, sezvinoita vazhinji vanozivikanwa. Zvichida anogona kuve neshanduko yemoyo maererano nehunyanzvi hwemuviri, pakupedzisira.
Chokwadi # 3: Martin Garrix Chitendero:
Pakunzwa kwezita rake, unogona kufungidzira kuti muKristu. Zviripachena, kufungidzira kwako hakusi kure nechokwadi nekuti Garrix anotenda kusingazununguki munaJesu Kristu.
se Margot Robbie, muDutch akashanda zvakanyanya kuti achengetedze muyero pakati pehupenyu hwake hwechitendero uye hwemagariro.
Martin Garrix Biography Pfupiso:
Usati wapedza mugadziri Hupenyu Hupenyu, tarisa nekukurumidza pfupiso yechirangaridzo chake mutafura iripazasi.
Zita rizere: Martijn Gerard Garritsen
Zita rekudanwa: Ytram uye GRX
Nzvimbo yekuzvarirwa: Amstelveen, Netherlands
Baba: Gerard Garritsen
Amai: Karin Garritsen
Vanun'una: Laura Garritsen
Musikana / Wawakaroorana naye: Lynn Spoor naBebe Rexha (vekare-vasikana)
Charelle Schriek (sa2021)
Net Worth: $ 22 Miriyoni (kubva muna 2021)
Hobbies: Skydiving uye kushambira
kukwirira: 1.75 m (5 Tsoka 9 Inches)
Tinozviona zvichifadza kuti Martin Garrix aigona kusiyanisa pakati pesimba rake uye utera kubva pamazuva ake ehuduku.
Ehe, kuzviwana kwake kwaita basa rakakosha mukusimuka kwake kwemeteoric mukurumbira kunyangwe asati asvika pakati pemakore makumi maviri.
Izvo zvese zvaive zvekutenda kuna baba vake naamai kuti akawana nzira yake kumagumo inofadza kwazvo. Yake yekubudirira nyaya haisi yake chete kukunda, asi zvakare kukunda kune yake yese mhuri, iyo isingachafanirwa kunetseka nezve zvemari matambudziko.
Tinokutendai nekuverenga yedu Martin Garrix Yevacheche Nyaya uye Untold Biography Chokwadi. Nomutsa tizivise mifungo yako nezve yake meteoric simuka kune mukurumbira muchikamu chekutaura pazasi.